Ny minisitra Bartlett dia mamolavola ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo amin'ny Oktobra 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny minisitra Bartlett dia mamolavola ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo amin'ny Oktobra 2021
Vaovao Mafana • Karaiba • Cruising • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Fitsangatsanganana an-dranomasina any Jamaika
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika Hon. Edmund Bartlett dia nilaza fa mifototra amin'ireo vinavina ankehitriny dia manantena izy ny fiverenan'ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo any Jamaika eo anelanelan'ny Aogositra sy Oktobra amin'ity taona ity. Ity nomarihiny ity dia miankina amin'ny fitantanana COVID-19 sy ny fitomboan'ny isan-jaton'ny olona vita vaksiny manerana ny nosy.
Ny famerenana ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo any Jamaika dia miankina amin'ny haavon'ny vaksiny avo kokoa an'ny mponina.
Ny minisitry ny fizahantany Hon. Edmund Bartlett dia nanao ny fanambaràna ho mpitondra tenin-tsoratra ao amin'ny webinar JMMB.
Nilaza i Bartlett fa ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fitsangantsanganana an-tsehatra eto an-toerana dia mikorontana kely fotsiny hiverina any amin'ny ranomasina Karaiba.
Nanao ny fanambaràna ny Minisitra nandritra ny “Webinar Thought Leadership Webinar” an'ny JMMB: vao tsy ela akory izay, izay izy no mpitondra tenin-teny.
“Ny mpiaramientana an-tsambo dia misedra kely ihany hiverina any amin'ny rano Karaiba. Na izany aza, ny haben'ny fiomanantsika manokana, raha ny fahitana ny fitantanana COVID-19, dia hamaritra ny hafainganan'ny fahatongavan'izy ireo. Ny vaksiny dia mazava ho azy fa elefanta lehibe ao amin'ny efitrano ary ho an'ny ankamaroantsika ao amin'ny faritra, eto isika ambany dia ambany ny haavon'ny vaksiny. Tokony hamboarintsika izany ary hametraka ny tenantsika amin'ny toerana hahitana olona be vaksiny ary hivezivezy milamina izy ireo, "hoy i Bartlett.
Hentitra ny Minisitra fa mifototra amin'ny vinavinan'ny toetr'andro ankehitriny, dia tsy hahita ny fiverenan-tsambo an-tsambo ny nosy raha tsy amin'ny faran'ny volana Aogositra ka hatramin'ny Oktobra 2021.
“Heveriko fa ny volana Aogositra ka hatramin'ny Oktobra ao anatin'io varavarankely telo volana io dia ho hitanao ny fitsangantsanganana an-tsambo feno. Mety mahita sambo kely iray na roa miditra isika, angamba amin'ny Aogositra. Na izany aza, ny fandraisako izany raharaha izany dia ny volana oktobra ho ahy toa volana lasa izay ahitanay fitsangantsanganana miverina any amin'ny faritra. Raha tsy averintsika io fotoana io dia hahita olana isika ”, hoy ny minisitra.
Ny minisiteran'ny fizahantany dia niasa am-pahavitrihana tamin'ny fiverenan'ny sambo fitsangantsanganana tamin'ity fahavaratra ity, tamin'ny fampiasana fomba fiasa miaraka izay hitondra sanda lehibe kokoa ho an'ireo mpandeha, sambo fitsangantsanganana ary Destiny Jamaika.
Faritra maro no efa nodinihina tamin'ny fifanakalozan-kevitra tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny sambo fitetezam-paritany, ao anatin'izany ny fifandraisana misy dikany kokoa, ny fandraisana an-trano, ny antso maro, ny fampitomboana ny asa, ny fampitomboana ny lanjan'ireo marika eo an-toerana ary ny fanatsarana ny traikefan'ny mpandeha, izay tokony hidika amin'ny fandaniana avo kokoa isaky ny mpandeha.